Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Ilungu elitsha leQatar Airways le-ICAO Umanyano loMdibaniso weeNqwelo moya
Airlines • isikhululo • Iindaba zeManyano • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • iindaba • abantu • Iindaba zaseQatar zokuqhekeka • Ukwakha kwakhona • Xanduva • News Sustainability • Technology • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel
I-Qatar Airways ibhengeza ukuthatha kwayo inxaxheba kuMdibaniso weHlabathi woBume boKhuseleko oluZinzileyo loMbutho wezoPhapho lwaMazwe ngaMazwe.
I-Qatar Airways iqinisekisa ukuzibophelela kwayo kwi-aviation decarbonisation kunye nokukhuthaza uthutho lomoya oluzinzileyo.
Umdibaniso we-ICAO weHlabathi woLondolozo lweeNdawo eziGcinekayo yiforum apho abachaphazelekayo banokuphuhlisa izimvo ezintsha.
I-Qatar Airways iyonwabile ukubhengeza ukuthatha inxaxheba kwayo kwi-Global Coalition for Austustable Aviation ye-International Civil Aviation Organisation (ICAO), iba yinqwelomoya yokuqala eMbindi Mpuma ukujoyina umanyano lwehlabathi, iqinisekisa ukuzibophelela kwayo ekusebenzeni kunye nabachaphazelekayo abachaphazelekayo kushishino. , ezinje ngabavelisi, izifundiswa, oorhulumente kunye nemibutho engekho phantsi korhulumente ngokubhekisele kwi-aviation decarbonisation kunye nokukhuthaza uthutho lomoya oluzinzileyo.
The ICAO Umdibaniso weHlabathi uphakamisa ukhuseleko ngenqwelomoya elizweni jikelele, lisebenza njengeqonga apho abo bachaphazelekayo banokuphuhlisa izimvo ezintsha kwaye bakhawulezise izisombululo ezitsha ezinciphisa ukukhutshwa kwegesi yendalo eluhlaza emthonjeni. Ikwajolise ekunikezeleni ngegalelo kuphuhliso nasekuphunyezweni kwebhasikithi yamanyathelo kunye nokuhlolwa kwenjongo yexesha elide yokusingqongileyo enxulumene nokuhamba ngenqwelomoya.
Qatar Airways UMphathi oyiNtloko weQela, oHloniphekileyo uMnu. Akbar Al Baker, uthe: “Kukuyila izinto ezintsha okuya kuqhubela phambili ishishini kwikamva elizinzileyo. Ndiyakholelwa ngamandla ukuba ICAO Umdibaniso weHlabathi woLondolozo lweeNdawo eziZinzileyo luya kuvumela amaqabane aphambili kushishino ukuba alandele indibaniselwano yokudala kunye nokuqhubela phambili izinto ezintsha kunye. I-Qatar Airways ijonge phambili ekubeni ngumdibaniselwano wobuchule kwimanyano. Silindele ukusebenzisana namanye amalungu ekuphuhliseni izimvo kunye nezicwangciso zokuqhubela phambili ukukhawulezisa ubuchwephesha bokuvelisa izinto ezintsha, ukusisondeza kwinqanaba lokusondela ekukhutshweni okupheleleyo. ”
Iindawo ekugxilwe kuzo zibandakanya, ukuphakamisa ulwazi ngenkqubela phambili eyenziweyo kwicandelo le-CO2 Ukuncitshiswa kokukhutshwa kweenqwelomoya kwilizwe jikelele, ukwakha kubunkokheli obusele bukhona kunye neentshatsheli, kunye nokomeleza ubuhlakani obukhoyo kunye nezinto ezintsha.
Qatar Airways iya kuba nakho ukwabelana ngamanyathelo ayo angaphambili kunye aqhubekayo kunye namanyathelo okujongana ne-CO2 izinto ezikhutshwayo, kunye nokubonelela ngolwazi oluxabisekileyo kubo bonke abachaphazelekayo, ukuze ube negalelo lomsebenzi okhokelwa ICAO. Kwangelo xesha, sinethemba lokukhuthaza amanye amaqabane oshishino ukuba athathe inxaxheba ekuthatheni inxaxheba kwiinjongo zethu ekwabelwana ngazo zotshintsho lwemozulu.